မွေးနေ့မွေးရက်အလိုက် ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ - For her Myanmar
မွေးနေ့မွေးရက်အလိုက် ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ
ရတနာစိန်ကျောက် ဇယ်တောက်ကစားကြမယ် 😛
ယောင်းတို့ရေ … တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အယူတွေထဲမှာ ကလေးလေးတွေကိုဆိုရင် ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်ဝတ်ရတနာ (နားကပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်စွပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွဲသီးလေးဖြစ်ဖြစ်) ဆင်ပေးတတ်ကြတယ် ဟုတ် ? ဒီလိုဆင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်ရတနာနဲ့တော့ တည့်တယ်၊ ဘာနဲ့တော့ခိုက်တတ်တယ်ဆိုတာတွေကို ဗေဒင်နက္ခတ်တွေနဲ့ တွက်ချက်တတ်ကြသေးတာ မဟုတ်လား။ ဒါနဲ့ နည်းနည်းခပ်ဆင်ဆင်ရှိတဲ့ ကိုယ့်မွေးနေ့မွေးရက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်ကျောက်မျက်ရတနာကို ဝတ်ဆင်သင့်သလဲဆိုတာ Stella ဝေမျှပေးမယ်နော်။
နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားများ
လတစ်လရဲ့ ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားသူတွေက နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေပါ။ ယောင်းက နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ “ပတ္တမြား” ကို ဦးစားပေးဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ပတ္တမြားရဲ့ သဘောတရားက အစွမ်းထက်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အဆင်ပြေစေတာကြောင့် ယောင်းအတွက် လပ်ကီးကောင်းတဲ့အဆောင်လေးပါ။
နံပါတ် (၂) ဂဏန်းသမားများ
လတစ်လရဲ့ ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားသူတွေမှာ မွေးဖွားသူတွေရဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာကတော့ “ပုလဲ” ပါ။ ပုလဲမှာ ဒေါသတွေကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အိပ်မပျော်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ မေ့တတ်တာတွေကို လျှော့ချပေးတဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။
နံပါတ် (၃) ဂဏန်းသမားများ
လတစ်လရဲ့ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားသူတွေကို နံပါတ် (၃) ဂဏန်းသမားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ “ဥဿဖရား”ကတော့ နံပါတ် (၃) ဂဏန်းသမားတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတွေ တိုးတက်စေပြီး စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးတတ်ပါတယ်တဲ့။
Related article >>> ယောင်းရဲ့အိပ်ခန်းလေးကို နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် အလှဆင်နိုင်ဖို့
နံပါတ် (၄) ဂဏန်းသမားများ
လတစ်လရဲ့ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားသူတွေက နံပါတ် (၄) ဂဏန်းသမားတွေဖြစ်ပြီး “ကျောက်နီ”ကို စွဲစွဲမြဲမြဲဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်ခြင်း မွေးဖွားပေးတာ ကျောက်နီပါ။
နံပါတ် (၅) ဂဏန်းသမားများ
လူတစ်ယောက်ဟာ လတစ်လရဲ့ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားတယ်ဆိုရင်တော့ နံပါတ် (၅) ဂဏန်းသမားပါပဲ။ နံပါတ် (၅) ဂဏန်းသမားတွေအနေနဲ့ “မြ” ကို ဝတ်ဆင်တာက အကြံဉာဏ်နဲ့ဗဟုသုတတွေ တိုးပွားစေပါတယ်။
နံပါတ် (၆) ဂဏန်းသမားများ
လတစ်လရဲ့ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ နံပါတ် (၆) ဂဏန်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ယောင်းဝတ်ဆင်သင့်တာကတော့ “စိန်” ဖြစ်ပြီး စိန်က အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးတွေကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေပါတယ်လို့ အဆိုရှိပြီးသားပါ။
နံပါတ် (၇) ဂဏန်းသမားများ
၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက်နေ့မွေးဖွားသူတွေကို နံပါတ် (၇) သမားတွေလို့ ခေါ်ပြီး ဆောင်သင့်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာကတော့ “ပယင်း” ပါ။ ပယင်းရဲ့ သဘောက စကားပြောကောင်းစေပြီး စိတ်အာရုံနဲ့ သူတစ်ပါးကိုဂလွှမ်းမိုးစေနိုင်ပါတယ်။
Related article >>> ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုငယ်ပုံပေါက်သွားအောင် မိတ်ကပ်ဘယ်လိုလိမ်းကြမလဲ?
နံပါတ် (၈) ဂဏန်းသမားများ
၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားသူတွေက နံပါတ် (၈) ဂဏန်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကို နှစ်ဆတိုးစေတဲ့ “နီလာ”ကတော့ နံပါတ် (၈) ဂဏန်းသမားတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာပါပဲ။
နံပါတ် (၉) ဂဏန်းသမားများ
နံပါတ် (၉) ဂဏန်းသမားတွေကတော့ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားကြပြီး “သန္တာ”ကို အဆောင်သဘောမျိုး ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ သန္တာကတော့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ကဲ.. ယောင်းတို့ရော ဘယ်ဂဏန်းသမားမို့ ဘာတွေ ဝတ်ရမှာတဲ့လဲ?
တစ်ခုရှိတာက ဒါတွေကိုပဲ ဝတ်ရမယ်လို့ တစ်ထစ်ချကြီး မယူစေချင်ဘူး ယောင်းတို့ရေ… ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ဝတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါတွေဝတ်ရင် ဒါတွေကျိန်းသေဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်လို့ ပြောထားတာလည်း မရှိဘူးမဟုတ်လား.. ဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ဝတ်ရင်း ဖက်ရှင်ကျကျ ဆင်ယင်နိုင်ကြပါစေနော်..
ရတနာစိနျကြောကျ ဇယျတောကျကစားကွမယျ 😛
ယောငျးတို့ရေ … တို့မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့အယူတှထေဲမှာ ကလေးလေးတှကေိုဆိုရငျ ငယျငယျကတညျးက လကျဝတျရတနာ (နားကပျလေးပဲဖွဈဖွဈ၊ လကျစှပျလေးပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆှဲသီးလေးဖွဈဖွဈ) ဆငျပေးတတျကွတယျ ဟုတျ ? ဒီလိုဆငျပေးတဲ့အခါမှာလညျး ဘယျရတနာနဲ့တော့ တညျ့တယျ၊ ဘာနဲ့တော့ခိုကျတတျတယျဆိုတာတှကေို ဗဒေငျနက်ခတျတှနေဲ့ တှကျခကျြတတျကွသေးတာ မဟုတျလား။ ဒါနဲ့ နညျးနညျးခပျဆငျဆငျရှိတဲ့ ကိုယျ့မှေးနမှေ့ေးရကျပျေါ မူတညျပွီး ဘယျကြောကျမကျြရတနာကို ဝတျဆငျသငျ့သလဲဆိုတာ Stella ဝမြှေပေးမယျနျော။
နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားမြား
လတဈလရဲ့ ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားသူတှကေ နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှပေါ။ ယောငျးက နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတဈယောကျဆိုရငျတော့ “ပတ်တမွား” ကို ဦးစားပေးဝတျဆငျသငျ့ပါတယျ။ ပတ်တမွားရဲ့ သဘောတရားက အစှမျးထကျပွီး လုပျငနျးဆောငျတာတှေ အဆငျပွစေတောကွောငျ့ ယောငျးအတှကျ လပျကီးကောငျးတဲ့အဆောငျလေးပါ။
နံပါတျ (၂) ဂဏနျးသမားမြား
လတဈလရဲ့ ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားသူတှမှော မှေးဖှားသူတှရေဲ့ ကြောကျမကျြရတနာကတော့ “ပုလဲ” ပါ။ ပုလဲမှာ ဒေါသတှကေို ဖွလြှေော့ပေးနိုငျတဲ့အပွငျ အိပျမပြျောတာ၊ စိတျဓာတျကတြာ၊ မတေ့တျတာတှကေို လြှော့ခပြေးတဲ့အာနိသငျရှိပါတယျ။
နံပါတျ (၃) ဂဏနျးသမားမြား
လတဈလရဲ့ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားသူတှကေို နံပါတျ (၃) ဂဏနျးသမားတှလေို့ချေါပါတယျ။ “ဥဿဖရား”ကတော့ နံပါတျ (၃) ဂဏနျးသမားတှအေတှကျ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈပွီး ပညာရေး၊ စီးပှားရေးတှေ တိုးတကျစပွေီး စိတျဓာတျခှနျအားကို မွှငျ့တငျပေးတတျပါတယျတဲ့။
Related article >>> ယောငျးရဲ့အိပျခနျးလေးကို နခေငျြစဖှယျဖွဈအောငျ အလှဆငျနိုငျဖို့
နံပါတျ (၄) ဂဏနျးသမားမြား
လတဈလရဲ့ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားသူတှကေ နံပါတျ (၄) ဂဏနျးသမားတှဖွေဈပွီး “ကြောကျနီ”ကို စှဲစှဲမွဲမွဲဝတျဆငျသငျ့ပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုပွီး စိတျရှညျသညျးခံတတျခွငျး မှေးဖှားပေးတာ ကြောကျနီပါ။
နံပါတျ (၅) ဂဏနျးသမားမြား
လူတဈယောကျဟာ လတဈလရဲ့ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားတယျဆိုရငျတော့ နံပါတျ (၅) ဂဏနျးသမားပါပဲ။ နံပါတျ (၅) ဂဏနျးသမားတှအေနနေဲ့ “မွ” ကို ဝတျဆငျတာက အကွံဉာဏျနဲ့ဗဟုသုတတှေ တိုးပှားစပေါတယျ။
နံပါတျ (၆) ဂဏနျးသမားမြား
လတဈလရဲ့ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားသူတှဟော နံပါတျ (၆) ဂဏနျးသမားတှဖွေဈပါတယျ။ ယောငျးဝတျဆငျသငျ့တာကတော့ “စိနျ” ဖွဈပွီး စိနျက အိမျထောငျရေး၊ အခဈြရေးတှကေို အဆငျပွခြေောမှစေ့ပေါတယျလို့ အဆိုရှိပွီးသားပါ။
နံပါတျ (၇) ဂဏနျးသမားမြား
၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရကျနမှေ့ေးဖှားသူတှကေို နံပါတျ (၇) သမားတှလေို့ ချေါပွီး ဆောငျသငျ့တဲ့ ကြောကျမကျြရတနာကတော့ “ပယငျး” ပါ။ ပယငျးရဲ့ သဘောက စကားပွောကောငျးစပွေီး စိတျအာရုံနဲ့ သူတဈပါးကိုဂလှမျးမိုးစနေိုငျပါတယျ။
Related article >>> ရှိရငျးစှဲအသကျထကျ ပိုငယျပုံပေါကျသှားအောငျ မိတျကပျဘယျလိုလိမျးကွမလဲ?
နံပါတျ (၈) ဂဏနျးသမားမြား
၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားသူတှကေ နံပါတျ (၈) ဂဏနျးသမားတှဖွေဈပါတယျ။ အောငျမွငျမှုကို နှဈဆတိုးစတေဲ့ “နီလာ”ကတော့ နံပါတျ (၈) ဂဏနျးသမားတှေ ဆောငျထားသငျ့တဲ့ ကြောကျမကျြရတနာပါပဲ။
နံပါတျ (၉) ဂဏနျးသမားမြား
နံပါတျ (၉) ဂဏနျးသမားတှကေတော့ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားကွပွီး “သန်တာ”ကို အဆောငျသဘောမြိုး ဝတျဆငျသငျ့ပါတယျ။ သန်တာကတော့ ဘေးအန်တရာယျတှကေနေ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျတဲ့။
ယောငျးတို့ရော ဘယျဂဏနျးသမားလဲ ?
တဈခုရှိတာက ဒါတှကေိုပဲ ဝတျရမယျလို့ တဈထဈခကြွီး မယူစခေငျြဘူး ယောငျးတို့ရေ… ကိုယျကွိုကျတာ ကိုယျဝတျလို့ရပါတယျ။ ဒါတှဝေတျရငျ ဒါတှကြေိနျးသဖွေဈကိုဖွဈမယျလို့ ပွောထားတာလညျး မရှိဘူးမဟုတျလား.. ဆိုတော့ ကိုယျကွိုကျတာ ကိုယျဝတျရငျး ဖကျရှငျကကြ ဆငျယငျနိုငျကွပါစနေျော..
Tags: Accessories, Astrology, birth stone, Fashion, jewerly
လုပ်ရတာလွယ်ကူ၊ စားလို့လည်းကောင်းပြီး ဝိတ်ကိုလည်း ထိန်းပြီးသားဖြစ်စေမယ့် ထောပတ်သီးသုပ်
မိုးတွေအုံ့ပြီး အေးတတ်တဲ့ ရာသီမှာ ရင်သွေးလေးကို ဖက်ရှင်ကျကျဆင်ပေးနိုင်ဖို့
Stella June 27, 2019
Stella June 5, 2019
ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဘရာကို ဆိုက်ဒ်မှန်မှန်ရွေးချယ်နည်းအဆင့် (၃) ဆင့်
Stella May 28, 2019